बेल्चाइट, Zaragoza मा इतिहास संग गन्तव्य यात्रा समाचार
बेल्चाइट, Zaragoza मा इतिहास संग गन्तव्य
बेल्चाइट यो जरागोजाको राजधानीबाट kilometers० किलोमिटर भन्दा कम दूरीमा छ र यो हो ऐतिहासिक स्थान किनभने यो स्पेनिश गृहयुद्धको क्रुएस्ट परिदृश्यमध्ये एक थियो। आज त्यहाँ एउटा नयाँ शहर छ तर मूल शहरका भग्नावशेषहरू, क्रूर र रक्तपातपूर्ण युद्धको साक्षी रहेको, अझै उभिरहेका छन् र भ्रमण गर्न सकिन्छ।
अत्रपालोले तयार पारेको "बानी र प्रवृत्तिहरूमा स्पेनी टुरिज्म २०१ 2018" रिपोर्टका अनुसार बेल्चाइट आज देशका आदर्श गन्तव्यहरू मध्ये एक हो किनकि यसको प्रस्तावले सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र खेलकुद गतिविधिहरू सँगै ल्याउँदछ र यसले हामीलाई पनि यसबाट हिंड्ने सम्भावना प्रदान गर्दछ। भूत शहर.
2 Belchite मा गर्न को लागी
3 Belchite मा खान र पिउनुहोस्
4 व्यावहारिक जानकारी विचार गर्न
5 टिकटको बारेमा जानकारी:
शहरको मूलको बारेमा हालसालै नयाँ विचार उठाइएको थियो, यसमा सम्बन्धित प्राचीन र celtiberian बेल्गेडा जुन पछि रोमीहरू आइपुगे। राजा थियो आरागोनको अल्फोन्सो I एक जसले ११०० को शुरुमा अरबको हातबाट यसलाई कब्जा गर्‍यो। उनले त्यो ठाउँ अपराधी र कुकर्मीहरूलाई दिए र उनीहरूलाई त्यो ठाउँ पुनर्स्थापित गर्नका लागि सबै दण्डहरू बिर्सिदिए र अझै खतरनाक थियो।
शताब्दियौंदेखि क्षेत्र जनसंख्या भएको थियो, ईसाईहरू, मुर्सहरू, यहूदीहरू२० औं शताब्दीको s० को दशकसम्म जनसंख्या करीव thousand हजार बासिन्दाहरू थिए। ती बर्षहरुमा PSOE का मेयरको कार्यालय थियो र जब रिपब्लिकन सरकारको बिरूद्ध कुपन भयो, जसले खुल्ला पार्छ गृहयुद्ध, क्षेत्र आक्रमक छ।
फलाng्गवादीहरू र सिभिल गार्डहरू सबै शहरहरूमा यात्रा गर्दछन् सरकारहरू तल झार्छन् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वामपन्थीहरूलाई पक्राउ गर्दछन् जसले धेरै प्रतिबद्धता जनाउँछन्। गोलीबारी। आफ्नै आत्महत्या पछि बेलचेटको मेयरको परिवारको भाग्य यो नै थियो, तर उही समयमा शिक्षक, मजदुर र किसानहरू मारिए।
यो अगस्टको अन्त्य र सेप्टेम्बरको सुरू बीच हो Belchite को युद्ध, Zaragoza मा कब्जा को रूपरेखा भित्र। शहरमा ठूलो क्षति भएको थियो र फ्रान्कोले शहर पुनर्निर्माण नगर्ने निर्णय गर्यो ताकि स्पेनले जहिले पनि उसले "रातो बर्बरवाद" को एक उदाहरण हेरे। सबै कुरा जस्तो थियो त्यस्तै भयो र नयाँ विला, नयाँ बेल्चाइट जुन १ 1954 .XNUMX मा तानाशाहको उपस्थितिमा खोलिएको थियो।
Belchite मा गर्न को लागी
पहिलो कुरा, अवश्य पनि हो ओल्ड टाउनको भ्रमण गर्नुहोस्। आर्को डे ला भिला पार गरेपछि, बारोक शैलीमा, तपाईं यस सेक्टरको सडकमा डेढ घण्टा हिंड्न सक्नुहुन्छ जुन दुई चर्चहरू, सान मार्टेन डे टुर्स र सान अगस्टन, मुडेजर शैलीको क्लक टावर समावेश गर्दछ र कथा सुन्न सक्नुहुन्छ। Belchite को त्यो युद्धमा उसको सन्तानहरूको मुखबाट। ठूलो कुरा यो हो कि यो यात्रा साँझमा र दिनको यस समयको छायासँग गर्न सकिन्छ यससँग अधिक नाटक छ। भ्रमण एकदम संवेदनशील छ र भनिन्छ "गृहयुद्धको ट्रेस"।
तपाईं अवशेष देख्नुहुनेछ खाडाहरू, भूमिगत ग्यालरीहरू, एक पुरानो एयरफील्ड, रक्षात्मक पोष्ट र शरणार्थी शिविरहरू। भ्रमणले तपाईंलाई १ 1937 .5 को गर्मीमा समयमै फिर्ता जान अनुमति दिन्छ जब बेलछाइट दुई हप्तासम्म नरकमा जलाइयो, त्यसमा XNUMX,००० मानिस मरे र शहर ध्वस्त भयो।
दुबै पुरानो शहर र वरपरका त्यहाँ लडाईको चिह्नहरू छन् र यदि तपाईं अन्य नगरपालिकाहरू भ्रमण गर्नुहुन्छ जस्तै Plenas, Codo, Azuara वा Fuendetodos तपाईंले पनि इतिहासको ट्रेसहरू देख्न सक्नुहुनेछ।
तर सत्य यो हो कि बेल्चाइटको १ 30 .० को दशक अघि इतिहास छ त्यसैले यसले प्रस्ताव पनि राख्छ यसको मध्ययुगीन विरासतको बारेमा सिक्न यात्राहरू। दिनको दौरानमा तपाईले उहाँको जीवनको यस अंशमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ जुनमा तीन संस्कृति प्रतिबिम्बित हुन्छन्, क्रिश्चियन, यहूदी र मोरीश। तिनीहरूको ट्रेस भवनहरूमा मात्र बनेको छ gastronomy.
बेलुका बेलुका र बेलछाइटको युद्धमा रात यात्रा अघि तपाईं सुन्नुहुनेछ खूनी अपराधीहरूका कथाहरू कि तिनीहरू मध्ये कोही यहाँ बाँचिरहेका थिए, याद गर्नुहोस् कि अल्फोन्सो मैले उनीहरूलाई हरियो बत्ती दिएको थिए, र केहि अरू भूत कथा।
यदि तपाईंसँग तपाईंको वरिपरिका सबै गन्तव्यहरू भ्रमण गर्ने समय छैन भने तपाईं छान्न सक्नुहुन्छ Fuendetodos यहाँ देखि त्यहाँ एक कुर्सी कार्यशाला छ कि उस्तै प्रविधिहरु फ्रान्सिस्को डे गोया प्रयोग गर्दछ। त्यसैले यहाँ गोइस्को टूर यो याद गर्न सकिदैन किनकि यसले विशिष्ट स्पेनिश चित्रकारको जन्मस्थान पनि समावेश गर्दछ।
आज यहाँ कुँदिएको स Muse्ग्रहालयले काम गर्दछ र तपाईंले मूल कामहरू देख्नुहुनेछ।
Belchite मा खान र पिउनुहोस्
यस क्षेत्रको एक छ एरागोनमा सब भन्दा ठूलो जैतुन खन्दा त्यसोभए जैतुनको तेलको स्वाद लिनको लागि यो राम्रो ठाउँ हो र कसरी क्षेत्रको मूल संप्रदायको साथ तेल उत्पादन हुन्छ भनेर हेर्नुहोस्। यदि तपाईं अल्फोन्सो मिलमा जानुहुन्छ, उदाहरण को लागी, तपाईं निर्देशित भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ। एकतर्त जैतुनका टोकरीहरू तर अर्कोतर्फ सुक्खा क्षेत्रहरू, खडबडी स्टेपहरू र कहिलेकाँही उपजाऊ उपत्यका पनि छन् जसको बीचमा तपाईंले हेर्नुभयो रोमन समय देखि खंडहर। केवल तपाईंको टुरिस्ट अफिसमा जानुहोस् नक्शा लिन सडक र पथहरू जान।
शताब्दीयौंसम्म पनि बेलचेट क्लासिक भएको छ। वाइनरीहरूले उनीहरूका ढोकाहरू खोल्छन्, उदाहरणका लागि बोडेगा टेम्पोर, लसेरामा, जसले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ स्थानीय मदिरा चाख्नुहोस् र केहि शपिंग गर्नुहोस्। र पनीरको एक टुक्रा भन्दा राम्रो के एक गिलास वाइनको साथ छ त्यसो नगरी यस क्षेत्रलाई नछोड्नुहोस् कारीगर चीज।
व्यावहारिक जानकारी विचार गर्न
Belchite को पुरानो शहर को समय (मार्च २ 25 सम्म):
दिन भ्रमण: प्रत्येक दिन १२ देखि pm बजेसम्म।
रातको भ्रमण: शुक्रबार र शनिबार बेलुका at बजे।
विशेष ईस्टर घण्टा:
/ / २ and र १/29 बीच: दिनका भ्रमणहरू बिहान ११ बजे, १२ बेलुका, १ अपराह्न,, बजे, साँझ 3, साँझ 1 र4बेलुका हुन्छन्।
२ / / and र /१/29ween को बीच राती भ्रमण १० बजे हुनेछ।
वसन्त समय (//4 र //१4 बीच):
दिनको भ्रमण: प्रत्येक दिन १२ र बेलुका at
रात भ्रमण शुक्रबार, शनिबार र आइतबार साँझ6बजे।
२/२ मा घण्टा १२ र2बजे हुन्छ र //2 मा यो स्थानीय बिदाका लागि बन्द हुनेछ।
टिकटको बारेमा जानकारी:
तपाईं Belchite वेबसाइट भ्रमण र गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन किन्नुहोस्। त्यहाँ तपाईं छनौट गर्न सक्नुहुन्छ Pueblo Nuevo मा निर्देशित भ्रमण, ला पुरानो शहर को लागी रातको भ्रमण, उही साइट वा दिनको भ्रमण जातीय संग्रहालयको भ्रमण गर्नुहोस् वा एक संयुक्त टिकट Pueblo Viejo दिन + रात। यो टिकटको मूल्य १२ यूरो छ। रातको यात्राको लागि १० यूरो लाग्छ त्यसैले संयुक्त टिकट सँधै सुविधाजनक हुन्छ।
त्यसोभए, अब हामी इस्टरको नजिक पुग्नै लागेका छौं र यसको दिनहरू पनि नजिक, जारागोजा जाने र बेल्चेटलाई कसरी चिन्ने?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » España » बेल्चाइट, Zaragoza मा इतिहास संग गन्तव्य
Vicente Calonge Asenjo भन्यो
धेरै सारांशमा भन्नुपर्दछ कि बेलचेटमा क्रुद्ध र आक्रोशित गर्ने पहिलो व्यक्ति रिपब्लिकन सेना र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रिगेड थिए र उनीहरूले महिला र बालबालिका लगायत सबै बासिन्दाहरूलाई घेरा हाले र नष्ट गरेका थिए जसले क्रूरतापूर्वक घेरा हालेका थिए र हत्या गरेका थिए। रिपब्लिकन सेनाले सहरमा बसोबास गरेपछि यो राष्ट्रिय सेनाले प्रतिकार गरे र यो शहरलाई निश्चित रूपमा पुनः प्राप्त गर्‍यो।
Vicente Calonge Asenjo लाई जवाफ दिनुहोस्
सिन्त्रामा पलासियो दा पेनाको भ्रमण गर्नुहोस्
म्याड्रिडमा पैदल यात्रा मार्गहरू